City of Vantaa - Hagis ku saabsan arrimaha karantiilka
Hagis ku saabsan arrimaha karantiilka / Soomaali (somali)
Karantiilka waxaa loola jeedaa in la xadido xorriyadda dhaqdhaqaaqa ama socodka ee qofka caafimaadka qaba, si looga hortago suurtaggalnimada ah in qofka xanuunku ku dhacay uu faafiyo cudurka, isagoo aan wax astaamaha cudurka ah lahayn. Karantiilku waxaa uu ku saleysan yahay sharciga cudurrada faafa ee tirsigiisu yahay 60.
Go’doominta waxaa loola jeedaa in qofka cudurku ku dhacay laga go’doomiyo dadka caafimaadka qaba. Sidoo kale go’doomintu waxaa ay ku saleysan tahay sharciga cudurrada faafa ee tirsigiisu yahay 63.
Go’aannada la xiriira karantiilka iyo go’doominta waa go’aanno ay gaaraan howlwadeennada dowladda oo ku saleysan sharciga cudurrada faafa, go’aannadaas u hoggaansankooda ama ku dhaqankooda waa kuwo khasab ah, mana ahan kuwo ku xiran rabitaanka qofka. Mudada karantiilka ama go’doominta waxaa lagu go’aamiyaa hadba xaaladda gaarka ah ee markaas go’aanka laga gaarayo sida ay tahay.
Waa maxay waxyaabaha la sameyn karo mudada karantiilka ama go’doominta? Maxayse yihiin waxyaabaha aan la sameyn karin?
Qof ka baxsan dadka guriga kula deggan lama yeelan kartid xiriir isu soo dhowaansho ah, waxna idinma dhexmari karaan.
Ma aadi kartid shaqada, iskuulka ama xannaanada. Shaqadana sidii caadiga ahyed ayaa guriga ku qaban kartaa dhanka internetka.
Ma raaci kartid gaadiidka dadweynaha, sida tareenka, baska, ama diyaaradda. Waxaa la heli karaa taksiyo loogu talaggalay dadka karantiilka ama go’doominta ku jira oo caag-muraayadeed uu ku xiran yahay. Markaad taksiga dalbaneyso, waxaad dalbataa midka noocaas ah ee loogu talaggalay dadka karantiilka ama go’doominta ku jira.
Ma aadi kartid goobaha guud ee dadku ku kulmaan, sida xarumaha dukaamada iyo maqaaxiyaha.
Adeeg uma aadi kartid dukaanka, farmashiyaha, sidoo kalena dano soo dhameysi uma aadi kartid xarumaha dowladda. Haddii aad u baahato inaad soo iibsato raashin ama daawo, waxaad caawimaad weydiisataa dadka ehelkaaga ah. Marka ay adeegga kuu keenaan, guriga yaysan soo gelin, adeegga ha kuu dhigaan albaabka laabkiisa.
Mudada karantiilka cidna guriga kuma martiqaadi kartid, sidoo kale qof nadiifiye ama dadka kale ee caadiga ahba uma yeeran kartid. Adiga laftigaaga cid kale gurigooda ma tagi kartid. Arrinkaan ma khuseeyo kalkaalisooyinka caafimaadka ee qaabilsan daryeelka guriga, laakiin waa in aad u sheegtaa arrinka ah in aad karantiil ku jirtid.
Lama aadi karo masaajidka, kaniisadda iyo goobaha la midka ah.
Lama aadi karo xarumaha isboortiga, golaha madadaadalada (tiyaatarka), shaneemada iyo goobaha kale ee hiwaayadda.
Goobaha guud ee dadka ka dhexeeya ee guriga aad deggan tahay ma aadi kartid, sidoo kale sawnada guud ee dadka ka dhexeysa ma aadi kartid.
Ha raacin wiishka. Haddii ay khasab kugu noqoto in aad isticmaasho wiishka, waa in aad kaligaa raacdaa.
Xusuusnoow nadaafadda caafimaadka wanaagsan ee la xiriirta arrimaha kala ah gacmo dhiqista, qufaca iyo duufsashadaba. Iska ilaali inaad taabato goobaha iyo alaabaha dushooda, kuwaasoo ay suurtaggal tahay in dadka kale ay taataabtaan. Waxaa meelahaas ka mid ah xayndaabyada jaranjarada iyo badhanada wiishka.
Mudada karantiilka aad ku jirto bannaanka waad ku soo lugeyn kartaa, adigoo ka fogaanaaya dadka kale. Dadka kaa horimaanaaya markaad lugeyneyso, waa inaad u jirsataa ugu yaraan masaafo dhan 2 mitir.
Xubnaha qoyska ee qofka la geliayay karantiilka, iyagu kuma jiraan karantiil, haddii aanay iyaga nafsad ahaantoodu u nuglaanin xaalad ah cudurka COVID-19 ee feyruska korona. Iyagu guriga dibaddiisa waa ay u bixi karaan.
Jawaabta ah negatiifka ama in aan qofka laga helin feyruska, kama fasaxeyso in qofku ka baxo karantiilka.
Ma waxaad heshay jawaabta natiijadii baaritaanka feyruska korona ee lagaa qaaday oo ah in lagaa helay feyruska, oo waxaad sugaysaa in qaybta dabaggalka cudurrada faafa ay ku soo wacaan?
Waxaad ka sii fekertaa, halka ay suurtaggalka tahay in aad cudurka ka soo qaadday.
Waxaad ka fekertaa dadkii aad la kulantay mudadii 48-ka saacadood ee ka horreysay inta aan xanuunku kugu dhicin, kuwaasoo aad in ka badan 15 daqiiqo meel gudaha ah isla joogteen:
Iskuulka ama macahadka waxbarashada
Xaflad ama munaasabado kale sida, munaasabad isboorti ama mid riwaayadeed.
Baar, makhaayad, shaneemo ama matxafka
Safar dalka Finland gudihiisa ama safar dibadda ah
Dano dhammeysi in aad u tagtay xarumaha dowladda
Si aad xusuustaada u firfircooni geliso oo aad wax u soo xusuusato, waxaad rogrogtaa ama aad fiirfiirisaa jadwalka taariikhda ama kaalentarka. Waxaad rasiidyada ka hubisaa, goobihii aad tagtay oo dhan.
Waxaad diyaarisaa liiska magacyada dadkii aad isaragteen oo dhan. Waxaad qortaa magaca qof kasta oo aad isaragteen, telefoonkiisa iyo magaalada uu deggan yahay.
Waaxda daryeelka caafimaadku uma sheegayaan qofka u nuglaaday feyruska, cidda ay suurtaggalka tahay in ay ka qaadeen u nuglaanta.
Haddii aad adigu dooneysid, waad u sheegi kartaa dadkii aad la kulantay in feyruska lagaa helay, oo ay suurtaggal tahay in ay u nuglaadeen feyruska korona.